Samsung Galaxy Ace Power Dead !!!!! — MYSTERY ZILLION
Samsung Galaxy Ace Power Dead !!!!!
May 2012 edited May 2012 in Android
ကျွန်တော် SS Galaxy Ace ကို rooting လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် success မဖြစ်ဘဲနဲ့ firmware ပျက်သွားတာနဲ့ Odin နဲ့ firmware ပြန်ရေးပါတယ်။ အကုန် ok ပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကံဆိုးချင်တော့ firmware မပြီးခင်မှာ USB ကြိုးကိုတိုက်မိပြီး ပြုတ်သွားပါတယ်။အဲဒီမှာ phone ကပါဝါပိတ်သွားပြီး Power Dead ဖြစ်သွားပါတယ်။ Downloading mod ကိုပါ၀င်လို့မရတော့ပါဘူး။ဘာဆိုဘာမှမလာတော့ပါဘူး။အဲဒါနဲ့ဆိုင်ကိုပြတော့ 45000 ကျမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပျက်ပြီးပြန်ယူလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကောင်းအောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရင်ရနိုင်မလဲဆိုတာလေး သိတဲ့သူများရှိရင် ကူညီပေးပါဦးခင်ဗျာ။
I don't know about that exactly, but try read this one first.
@K Thankie !! But it is for GIO. I tried some several ways but not success.
MZ မှာအဖြေ ရှာမတွေ့ရင် တခြား နိုင်ငံခြားက Forum တစ်ခုခုမှာ မေးစေချင်တယ်။ အမှန်က အဲ့လို ဖြစ်တာက ဘာမှ သိပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာသူ နည်းရှိပြီးသား။ ပစ္စည်းလည်း လဲရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲ့ဒါကို ဖုန်းဆိုင်တွေက Service ဆိုပြီး ညှပ်ချနေကြတာ။
နောက်ဆုံး အဆုံးစွန်ထိ မရတော့ဘူးဆိုမှ သာ လက်လျော့ပြီး ပေးလိုက်ပေတော့. (:|
ဒါနဲ့ အစ်ကို့ ဖုန်းက Samsung S5830 ACE လား?
yap SS 5830 Ace.
Try this one, too. T_T
you can press power down+home button+lock button press 10 second and you can see recovery mod
and you must press lock button+home button Now you will see downloading mode . And you connect pc and rewrite firmware with odin (lastest version) . But the firmware you update is must one package
ပေးရနိုင်တာပေါ့။ အိုင်တောင် သင်တန်းတက်တာ software တင် ၃၀၀၀၀၀ ပေးလိုက်ရသကော။ အပြီးအငြိမ်း ၇၅၀၀၀၀ ပေးလိုက်ရတယ်။ သင်တန်းဆင်းရော ၉၀၀၀၀၀ ကုန်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်လာအပ်ရင် တောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ ကျေမှာလေ။ ဟီး။ ပြောပေးချင်ပါတယ်။ ၀ယ်လာတိုင်း root လုပ်တာ မလုပ်ကျပါနဲ့။ လူကြီးမင်းတို့တက်နိုင်တာ သိပါတယ်ဂျာ။ ခက်တာက တောင်းလိုက်ရင် မတန်ဘူးပြောခံရလို့ပါ။ ဈေးသက်သာပြီး root လုပ်လို့ရတာတွေပဲ၀ယ်သုံးပါလို့...